C Thu Kyaw - REDLINE MEDIA
Articles of C Thu Kyaw
J.D. Power မှ 2020 ခုနှစ်အတွက် Initial Quality Study ဆု အများဆုံးဆွတ်ခူးသည့် Automotive Group အဖြစ် Hyundai Motor အားသတ်မှတ်
J.D. Power မှ Hyundai Tucson အား အကောင်းဆုံး ကနဦးအရည်အသွေး Compact SUV ဆု ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး Hyundai Veloster အား အကောင်းဆုံး Compact Sporty ကားအမျိုးအစားဆုကို ချီးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။...
Toyota ရဲ့ မြန်မာစက်ရုံ ထပ်တိုးသွားမယ့် authorized dealers တွေနဲ့ 2020 Corolla Altis အပြင်ကိုမှ တိုကျိုအိုလံပစ်နဲ့ Toyota အကြောင်းတွေကို ပြောပြသွားခဲ့တဲ့ Mr. Hiroyuki Oide...
Ford Everest Titanium နဲ့ဆိုရင်
Ford Everest နဲ့ အဝေးပြေလမ်းမတွေဟာ အနွေးထွေးဆုံးမိသားစုတွေအတွက် ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်မယ့် မိုင်တိုင်တွေကို ပြန်လည်အောက်မေ့လိုက်တိုင်း နှစ်လိုဖွယ်ရာတွေအဖြစ် ထာဝရစိုက်ထူသွားနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။...
ဆိုင်ဂုံ သို့မဟုတ် ဟိုချီမင်းစီးတီးနှင့် Vietnam Motor Show 2019
"Audi ဟာအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်သူ အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရ ထိပ်ဆုံးအဆင့်မှာရှိတယ်။ လှပမှုထက် အလုပ်ဖြစ်မှုကို ဦးစားအမြဲပေးထားတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ထူးခြားတာကတော့ ကမ္ဘာအနှံ့ ဘယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုမဆို တူညီပြီး မြင့်မားလှတဲ့ အရည်အသွေးကိုပဲ ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။...
“ကားတွေနဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင်ပတ်သက်ဖို့တော့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပဲ ချစ်မိသွားတာပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချာတိတ်တစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပါမှာပေါ့လေ’’.........
ဗီယက်နမ်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် Vietnam Motor Show 2019 နှင့် Audi
ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ကမ္ဘာအနှံကားအစီးရေ ၁.၈ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လာချိန်တွင်လည်း ကမ္ဘာအနှံ့တင်ပို့ရောင်းချသည့် အရည်အသွေးအတိုင်း အပြည့်အဝရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်.........
မြန်မာ့လမ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ကားတစ်စီးကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာကို 5C အဖွဲ့သားတွေ တွေ့ကြုံသိရှိလာ ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ညွှန်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ Toyota ဟာ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကို ဖန်တီးထားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “မြန်မာ့နှလုံးသားကို ခံစားနားလည်ခြင်း” ဆိုတာပါပဲ။...
ထူးခြားတာက Hyundai Motor Myanmar ကနေပြီး လက်ရှိထုတ်လုပ်ဆဲဖြစ်တဲ့ Creta 2019 ကိုမှ ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ customers တွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို အလေးအနက်အထားထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မွမ်းမံတည်ဆောက်ထားတယ်လို့ဆိုထားခြင်းပါ........